शनिको साढे सात ग्रह दशाको दोष हटाउन के गर्ने ? » बुद्ध भूमि नेपाल
काेराेनाको नयाँ रेकर्ड : एकैदिन ४ लाखभन्दा बढी संक्रमित थपिए, अमेरिकामा झन् बढ्दै
Home/आस्था/विश्वाश/शनिको साढे सात ग्रह दशाको दोष हटाउन के गर्ने ?
मीन राशिका व्यक्तिमा शनिको सातको प्रभावले अप्रत्याशित लाभको अवसर जुराउँछ । तर लगातारको कामबाट हुने आर्थिक उन्नतिमा भने बाधा हुनसक्छ । भाग्य अनुकूलता नभएमा जस्तो मेहनत गरेमा पनि बनेको काम गुम्न सक्छ । तर मेहनत छाड्नु भने हुँदैन, पछि यसले लाभ दिन्छ । Source:khabarhub
१ कार्तिक २०७७, शनिबार ०७:००
३० आश्विन २०७७, शुक्रबार १९:००